Isiteshi seOlimpiki, usetyenziso lwabo bonke abathandi bezemidlalo | IPhone iindaba
Ijelo leOlimpiki, usetyenziso lwabo bonke abathandi bezemidlalo
Imidlalo ihambisa inyambalala, Ingaba u inkqubo yolonwabo egxile kubaphulaphuli abaninzi, ewe, kukho imidlalo kunye nemidlalo kwaye awunakukwazi ukukhuphisana nesigebenga esibizwa ngokuba yiSoka. Ibhola ekhatywayo ihambisa abantu, ikuko konke, ewe nakwizixhobo zethu eziphathwayo (kuya kufuneka ubone ukuba ezonaapps zikhutshelweyo kudidi lwezemidlalo zinxulumene nebhola ekhatywayo).
Kodwa uza kuthini ngazo zonke ezo zinto abanye ezemidlalo? Kuthekani ngale midlalo inokusasazeka "okuncinci" ngexesha lemidlalo yeOlimpiki? Ngaba asinamdla ngokwenene? Ukuba ungabathandi bezemidlalo, uya kuwuthanda nawuphi na umdlalo, nokuba uyawenza okanye uyakonwabela ukuwubukela, ewe, usetyenziso olugqibeleleyo luzelwe nje bonke abo bafuna ukonwabela nawuphi na umdlalo: Isiteshi seOlimpiki, usetyenziso lwe-IOC ukuze sikwazi ukulandela nawuphi na umdlalo kwii-iDevices zethu ...
1 Apho imidlalo ingaze iphele
2 Kuba iintsuku ezili-17 azonelanga
Apho imidlalo ingaze iphele
Njengoko ubona kwividiyo edlulileyo, isindululo esenziwe yi-IOC kuthi ngeChannel yeOlimpiki yinto enkulu kakhulu: ukubanakho ukulandela ezemidlalo iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki, ayisiyomfuno nje kuphela. Kwaye emva kweminyaka emibini ukusukela oko yaqala iprojekthi yeChannel Olimpiki, iye yaba liziko lemidlalo emanyelwayo.
Kuba iintsuku ezili-17 azonelanga
UMaria Escario sele etshilo, emva komsitho wokuvala wemidlalo yaseRio, ukuba ngosuku olulandelayo bazakuthetha ngebhola ekhatywayo kwakhona. Ibhola ekhatywayo ngumdlalo, kodwa ayisiyiyo yonke into ... Ukusuka kwi-app ngokwayo esinako Yonwabela iminyhadala yemidlalo, amaxwebhu, iividiyo zoovimba (ukusukela ngo-1912) zokhuphiswano olukhulu kunye neengxelo. Kwaye bomelele, baqala ukuhamba ngaphezulu okanye ngaphantsi emva kwemidlalo yaseRio ngaphezulu kwama-600 amaqhekeza eprogram. Uyazi, iChannel yeOlimpiki sisicelo esinyanzelekileyo kuwo wonke umthandi wezemidlalo, ngokupheleleyo simahla y Jikelele (Ungayisebenzisa kuzo zombini i-iPhone kunye ne-iPad).
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ijelo leOlimpiki, usetyenziso lwabo bonke abathandi bezemidlalo
I-LastPass ibhengeza ukungqamanisa ngeXabiso lesiXhobo samaXabiso saSimahla
1Password iya kuhambelana neTouch Bar kunye neTouch ID ye-MacBook Pro entsha